News Collection: मह जोडीको दसैं अनुभव
मह जोडीको दसैं अनुभव
मह अर्थात् मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य नेपाली हाँस्य क्षेत्रका पर्याय नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । तीन दशकदेखि निरन्तर हाँस्य क्षेत्रमा सक्रिय यस जोडीले सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै रुचि राख्दै आएको छ । नैतिकताको कमी भइरहेको समयमा धेरैको ‘आइडल’ बन्न सफल यस जोडीले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा निर्वाह गरेको भूमिका कसैले बिर्सन सक्दैन् । एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा यो जोडी अन्यका लागि अनुकरण नै बनेका छन् । मह जोडीलाई दसैँको अवसर पारेर गरिएको कुराकानी ।
पहिलो पटक कति दक्षिणा पाउनुभएको थियो ?
मनकृष्णः सानो छँदा घरको हजुरबुबाले एक मोहोर दिएको सम्झना छ ।
अहिलेसम्म थोरैमा कति र धेरैमा कति दक्षिणा पाउनुभएको छ ?
-थौरैमा एक पैसा बढीमा एक हजार रुपियाँसम्म ।
दक्षिणा थाप्न धेरै ठाउँ डुलियो कि ?
-डुल्ने गरी नै दक्षिणा थाप्न गइएन, गएको ठाउँमा कही दिन्थे, कही दिँदैनथे । मामाघर चाहिँ गइन्थ्यो ।
दक्षिणा पाएको पैसा के गरिन्थ्यो ?
-पिपरमेन्ट किनेर खाइन्थ्यो ।
नयाँ लुगा किन्न झगडा गर्नुभयो ?
-नयाँ लुगा लगाइन्थ्यो तर यस्तो नै चाहियो भनेर झगडा गरिएन ।
मासु मनपर्छ ?
-मासु नखाएको ११ वर्ष भयो । पहिले भने खाइन्थ्यो । खसी काटेको देखेर खान मन नपरेको हो । खसीलाई काट्दा आफूलाई पनि दुख्छ जस्तो लाग्यो ।
मासु खाने समयमा खसी ढाल्नुभयो कि ?
-ढालिएन, खुट्टा पनि समातिएन ।
नवरात्रीमा मन्दिर कतिको गइन्छ ?
-पहिले पहिले नौ दिनसम्म मन्दिर जान्थे । अहिले जाने वातावरण नै छैन ।
दसैँलाई कति बजेट छुट्याउनुभएको छ ?
दसैँका लागि विशेष योजना छ ?
-दसैँ भनेको रमाइलो चाडपर्व हो । चाडवाडमा आमाबाबुसँग रमाइल्ाो गर्न पाए पो आनन्द हुन्थ्यो । छोरा र छोरी अमेरिकामा छन्, दसैँप्रति त्यति उत्साह छैन । कम्युटरमा हेरेर टीका लगायो, यस्तै छ ।
दसैँमा ससुराली गइएला नि ?
-ससु्राली मात्र होइन सबै आफन्तकहाँ गइन्छ ।
सानोको मामाघर रमाइलो कि बिहे भएपछि ससुराली घर ?
-मामाघर नै रमाइलो ।
घरमा कति मानिस टीका थाप्न आउँछन् ?
-४०/५० जना ।
हिन्दी फिल्मको हिरो जस्तो लाग्थ्यो
दसैँ आयो, कस्तो अनुभव भइरहेछ ?
हरिवंशः दसैँ वर्षैपिच्छे आउँछ, जान्छ । अरूबेलामा काममा व्यस्त भइन्छ । यो बेला सबैको फुर्सद हुन्छ । यो फुर्सदमा आफन्त, साथीभाइ सबैजना भेट हुँदा रमाइलो लाग्छ ।
सानो छँदा जत्तिकै रमाइलो अहिले हुन्छ त ?
-सानो छँदा भिन्नै रमाइलो, ठूलो भएपछिको भिन्नै रमाइलो । ठूलो भएपछि काम गर्नुपर्छ । कमाउनुपर्छ । आपै“mले काम गरेर कमाउँदाखेरिको रमाइलो छुट्टै हुन्छ ।
सम्झना भएसम्म पहिलो पटक दसैँमा कति दक्षिणा पाउनुभएको थियो ?
-सानो छँदा एक मोहर/एक रुपियाँ दिने चलन थियो । मामाघरमा एक रुपियाँ दक्षिणा पाएको थिएँ ।
दक्षिणालाई के गर्नुहुन्थ्यो ?
-खुत्रुकेमा खसाल्थे । चङ्गा, लटाई किन्थेँ ।
दसैँमा टीका थाप्न रमाइलो कि दक्षिणा बटुल्न ?
-सानो छँदा दक्षिणा बटुल्न, ठूलो भएपछि टीका थाप्न रमाइलो ।
सानोमा तास पनि खेलियो कि ?
-तास खेल्दैनथेँ । बरु तास खेलेको ठाउँमा गएर पैसा लुटेर भाग्थेँ ।
पैसा लुट्न मन लाग्नुको कारण ?
-त्यतिबेला हुल्याइँ गर्न मन लाग्थ्यो ।
सानोमा नयाँ लुगा लगाउन पाउँदा कस्तो लाग्थ्यो ?
-अहिले जस्तो त्यो बेलामा धेरै लुगा हुँदैनथ्यो । एक/दुई जोर हुन्थे । दसैँ आएपछि नयाँ लुगा सिलाएर टीकाको दिन लगाउने भनेर बाकसमा हालेर राखिन्थ्यो । कहिले टीकाको दिन आउला भनेर बाकस खोल्दै हेर्दै गर्थें । अझ नयाँ लुगाबाट आउनेे सेन्टलाई सुँघ्ने पनि गर्थें । टीकाको दिन नयाँ लुगा लगाएर सडकमा हिँड्दा त आफूलाई हिन्दी फिल्मको हिरो भएको जस्तो लाग्थ्यो । ऐना पनि हेरेको हेर्‍यै गर्थें ।
दसैँमा टीका लाउने मानिस धेरै छन् कि लगाइदिने ?
-परिवारको जेठो भएकाले लगाइदिनुपर्ने धेरै छन् । साढे दुई सय जतिलाई लगाइदिन्छु, चालीस/ पचास जनासँग लाउँछु ।
अरूलाई कति दक्षिणा दिनुहुन्छ ?
-बढीमा १०० रुपियाँ, घटीमा २० रुपियाँ ।
दसैँमा के कुरामा बढी खर्च हुन्छ ?
-दक्षिणा, खाना र यातायातमा बढी खर्च हुन्छ ।
दसैँमा कसरी रमाइलो गर्नुहुन्छ ?
-टीका लाउने/लगाइदिने र पहुनालाई स्वागत गर्न पाउँदा नै दसैँमा रमाइलो लाग्छ ।
जाड रक्सी, मासुमा रुचि छैन ?
-मासु अलिअलि खान्छु । उमेरको कारणले पनि धेरै खानु हुँदैन । साथीभाइ जम्मा भएर एक बोतल बियरसम्म पिइन्छ ।
दसैँमा खसी ढाल्नुभएको छ ?
-मेरो घरमा काटमार हुँदैन । सानो छँदा हुन्थ्यो । जब ममा दसैँमा काटमार गर्नु रुढिवादी परम्परा हो भन्ने चेतना आयो, त्यो बेलादेखि काटमार बन्द गरें । बजारबाट किनेर ल्याएको मासु खान्छु ।
कुनै बेला खसी ढाल्दा खुट्टा चाहिँ समातियो कि ?
-सानोमा एक दुई पटक समातियो । अहिले पश्चाताप लाग्छ । यो बालविकार पनि हो । संस्कार नै त्यही भएकाले दसैँमा साथीभाइबीच खसीको धाक लगाउँदा, खसी ढाल्दा रमाइलो लाग्थ्यो ।
पहिले र अहिलेको दसैँमा के फरक छ ?
-पहिलेको दसैँमा प्रकृतिसँग रमाउन पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन । दसैँमा टीका थाप्न भनेर हिँड्दा तोरीबारीका फाँटैफाँट हिँड्नुपथ्र्यो । यसरी हिँड्दा माटोको एक किसिमको सुगन्ध आउँथ्यो तर अहिले घरैघरका बीचबाट धुलो र धुँवा खाएर टीका थाप्न हिँड्नुपर्छ ।